Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Technology » Socdaalka Hore ee Maalinta Koowaad: Sirdoonka macmal ah waa dhab
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Technology • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Socdaalka Hore ee Maalinta Koowaad: Sirdoonka macmal ah waa dhab.
AI kaliya waxay shaqeysaa marka xogta, iyo goobta martigelinaysa, ay ku habboon tahay ujeedada adeegsiga AI si loo dhiso khibrado ka wanaagsan dadka safarka ah.
Maalinta furitaanka Safarka Horudhac waxa ay ku bilaabatay fadhi loogu talagalay AI safarka.
Qalabku waxay u jiraan shakhsiyaynta tirada badan - laakiin maskaxdu waxay u baahan tahay inay beddesho. Kala qaybsanaantu maaha shakhsiyaynta.
Haddii aad wadaagto xogta, algorithms-yadu waxay ka shaqayn karaan dhammaan ilaha, shakhsiyaynta waxay noqon kartaa iskaashi, iskaashi.
Maamulayaasha sare ee tignoolajiyada ee ka kala socda warshadaha safarka ayaa aaminsan taas sirdoonka macmalka ah (AI) waxay ka ciyaari doontaa door muhiim ah oo horseedaya soo kabashada safarka ilaa inta maskaxdu dejinayso iyo dabeecadaha ku wajahan wadaagga xogta isbeddelka.
Maalinta furitaanka Safarka Horudhac waxay ku bilaabantay fadhi loogu talagalay AI safarka.
Andy Owen-Jones, oo ah maamulaha guud iyo aasaasaha AI-early-adpter bd4travel, ayaa sheegay in AI iyo barashada mashiinka ay tahay habka kaliya ee shirkadaha socdaalku ay "ku baranayaan" waxa safarradoodu rabaan.
Si kastaba ha ahaatee, si aad uga gudubto "celcelis ahaan" oo aad u gasho "shakhsiyeynta", AI takhasusayaashu waxay u baahan yihiin inay helaan xogta
"Qalabka ayaa u jira shakhsiyaynta tirada badan - laakiin maskaxdu waxay u baahan tahay inay beddesho. Kala qaybsanaantu maaha shakhsiyaynta."
Sundar Narasimhan oo ka socda Saber Labs ayaa xusay in kala duwanaanshahan uu ka tarjumayo sida ganacsigu u codsado AI iyo barashada mishiinada safarka ayaa hadda la farsameeyay oo la hagaajiyay si loo wanaajiyo waayo-aragnimada socotada iyo ka fogaanshaha wax-soo-saarka alaab-qeybiyeyaasha.
Waxa kale oo uu ku taliyey fikrado cusub oo ku saabsan wadaagista xogta.
"Haddii aad wadaagto xogta, algorithms-yadu waxay ka shaqayn karaan dhammaan ilaha, shakhsiyaynta waxay noqon kartaa iskaashi, iskaashi." Wuxuu qeexay kiis isticmaalka mustaqbalka halkaasoo AI ay ku siin karto khibrad safar halkaas oo duulimaadka iyo hoyga labadaba la gaarsiiyey.
Fikradaha, jaangooyooyinka cusub iyo fikirka cusub ayaa ahaa mawduuc inta lagu gudajiray kalfadhiyada kale sidoo kale. Jospeh Ling oo ka socda Vouch ayaa sharaxay sida ganacsigiisu uu u bedelayo fikradaha warshadaha hoteelada.
"Waa inaan ku qancinnaa milkiilayaasha hoteelada in isdhexgalka bani'aadamku uusan u sinneyn dhammaan meelaha la taaban karo. Alaabtayadu waxay ka caawisaa milkiilayaasha hudheelada inay si otomaatig ah u qabtaan hawlo badan oo aan loo baahnayn taabashada bini'aadamka, taas oo u fasaxaysa shaqaalaha hudheelka si ay diiradda u saaraan hawlaha kuwaas oo saameyn ku leh khibradda martida, "ayuu yidhi.
Warshadaha kale ee maskaxdu u baahan tahay isbedel waa duulista. Dood-cilmiyeedka galabta ayaa ahaa mid aan mugdi ku jirin oo aragtidooda lagu sheegay in hagaajinta xogta wadaagga shirkadaha diyaaradaha, hawl-wadeennada madaarka iyo maamulka hawada ay kor u qaadi karto hufnaanta diyaaradaha iyo hab-socodka, iyadoo faa’iido degdeg ah ay ka dhalan karto qiiqa qiiqa yar yar ee gubanaya.
Yann Cabaret oo ka socday SITA ayaa u sheegay qolka buuxsamay in "teknoolajiyada casriga ah ay taageerto wada shaqaynta - xogta aan hayno waxaan codsan karnaa barashada mashiinka si aan u wanaajino dhaqdhaqaaqa diyaaradaha, cirka ama garoonka."
Si kastaba ha ahaatee, tixgelinta ganacsigu waxay ka hortagtaa hawl-wadeenno badan oo ganacsi oo gaar loo leeyahay inay wadaagaan xogta midba midka kale, xaalad aan la socon karin la dagaallanka xaaladda degdegga ah ee cimilada. "Dadaallada warshadaha waxay shaqeyn karaan oo kaliya haddii qof walba uu ku jiro," ayuu yidhi.
Mugga xogta habaysan iyo qaabaysan ee gudaha warshadaha safarka waxay abuurtaa jawi ku habboon sirdoonka macmal si ay u soo saaraan badeecooyin cusub, waayo-aragnimo wanaagsan oo loogu talagalay socotada iyo dakhliyo badan oo shirkadaha safarka ah. Si kastaba ha ahaatee, natiijada tani waa in mugga xogtu ay ka dhigan tahay in shirkaduhu ay ka fikiraan xaqiijinta xogta ka hor inta aan la isticmaalin.
Buug-gacmeedka Hilty oo ka socda khabiir ku takhasusay tikniyoolajiyada qorsheynta safarka ee maalmo badan Nezasa ayaa sheegay in ganacsigiisu uu horumarinayey madalkiisa si ay u taageerto falanqaynta xogta iyo AI ee cabbirka oo ay u adeegsato fikradaha heer shaqsiyeed.
"Qorshaynta, ballansashada iyo buuxinta safarro-maalmo badan ayaa leh meelo badan oo la taaban karo oo mid walba uu leeyahay lakabyo kakan," ayuu yidhi. "Waan ognahay in AI kaliya uu shaqeeyo marka xogta, iyo goobta martigelinaysa, ay ku haboon tahay ujeedada isticmaalka AI si loo dhiso khibrado wanaagsan oo loogu talagalay dadka safarka ah".